Madaxweynaha Puntland oo bil kadib safar dibadda ah uga baxay Muqdisho kana hadlay heshiiskii doorashada | XORRIYA NEWS
Home Wararka Madaxweynaha Puntland oo bil kadib safar dibadda ah uga baxay Muqdisho kana...
Madaxweynaha Puntland oo bil kadib safar dibadda ah uga baxay Muqdisho kana hadlay heshiiskii doorashada
Madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullahi Deni ayaa safar dibadda ah u baxay kadib muddo bil ah oo uu ku sugnaa magaalada Muqdisho ee caasimada Soomaaliya.
Deni oo Muqdisho yimid maalintii koowaad ee bishii hore ayaa gelinkii dambe ee Jimcihii shalay u ambabaxay magaalada Nairobi ee Kenya, isagoo intii uu joogay Muqdisho wax ka jaangooyey arrimaha doorashooyinka dalka oo haatan heshiis laga gaaray.
Madaxweyne Deni ma shaacin waxyaabaha uu salka ku hayo socdaalkiisa uu ugu baxay Nairobi, “Waxa aan maanta safar gaar ah ugu baxayaa Muqdisho, kadib mudo bil ah oo aan u joogay, howlo la xiriira doorashada iyo arrimaha geedi socodka siyaasadda dalka” ayuu yiri.
Madaxweynaha Deni ayaa inta uusan Muqdsho ka bixin ka hadlay hehsiiska laga gaaray arrimaha doorashooyinka iyo jadwalka ay sida wadajirka ah u soo saareen, kaasi oo cadeynaya xilliga ay dhacayaan doorashooyinka baarlamaanka labada Aqal, guddoonka baarlamaanka iyo tan Madaxweynaha.
“Muqdisho muddada aan joogay waxa aan qayb ka ahaa madaxda saldhigtay doorashada, xiliga ay dhaceyso iyo heshiiska kawada shaqeynta dardargelinta geedi socodka dalka, waxaana rajeynayaa in doorashada dalka ay ku dhici doonto xasilooni iyo midnimo, khilaaf waliba lagu xaliyo wadahadal, wadajirna looga shaqeeyo amniga oo laf dhabar u ah dhamman howlaha loo baahan yahay in la sameeyo” ayuu yiri.